‘सोचेअनुसार खोप पाउन सकिएको छैन, चीनबाट आएको फरक छ’ | Ratopati
आइतबार ५ बैशाख, २०७८ Sunday, 18 April, 2021
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति
‘सोचेअनुसार खोप पाउन सकिएको छैन, चीनबाट आएको फरक छ’
अघिल्लो महामारीबाट सिकेका कुरालाई संस्थागत गर्छौं : डा. समीरकुमार अधिकारी
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeचैत २०, २०७७ chat_bubble_outline0
भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएको छ । नेपाल–भारत सीमा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ । नेपालमा पनि केही दिनयता संक्रमण दर बढिरहेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि सरकारको तयारी फितलो भएको भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरुले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
के नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा पहिलेकै गल्ती दोहाेर्याउँदैछ त ? कोरोना रोकथामका लागि सरकारको तयारी के–कस्ता छन् ? अनि, पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुले कहिलेदेखि दोस्रो डोज लगाउन पाउँछन् ? आम नागरिकहरुमा उठिरहेका यिनै प्रश्नबारे सरकारको धारणा बुझ्न रातोपाटी डटकमले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ ।
डा. अधिकारीले संक्रमणको दोस्रो लहरबारे सरकार सजग रहेको र विगतका कमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर अघि बढिरहेको दाबी गरे । उनले पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुलाई दोस्रो डोज दिनका लागि नेपालले सोचे अनुसार खोप प्राप्त गर्न नसकेको तर, झिकाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
पहिले लगाइएको कोभिशिल्ड खोप र अहिले चीनबाट आएको खोप फरक भएको बताउँदै डा. अधिकारीले भने, ‘नेपालले यसअघि दिएको कोभिशिल्ड खोप र चीनबाट आएको भेरोसेल खोप फरक छ, सबैलाई पुग्ने गरेर खोप छैन । यी सबै कुरालाई हेरेर तयारी भइरहेको छ ।’
प्रस्तुत छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भेरोसेल खोप दिने अभियान कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुले दोस्रो डोज कहिलेदेखि पाउँछन् ?
कोभिशिल्ड खोप १७ लाख ५७ हजार बढीले पहिलो डोज लगाइसकेका छन् । दोस्रो डोजका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । खोपको उत्पादन कम र माग बढी भएकाले सोचेअनुसारको खोप नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विभिन्न विधि प्रक्रियाबाट सरकारले पहल गरिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक चीनबाट प्राप्त ८ लाख जोड खोप नेपालमा आइपुगेको छ । त्यस खोपलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको तयारी मन्त्रालयले गरिहेको छ । खोप आएको धेरै समय भएको छैन । विश्व बजारमा खोपको अभाव भइसकेपछि प्राप्त खोप मन्त्रालयले कहिलेदेखि लगाउन सुरु गर्छ भन्ने चासो सबैमा छ ।
नेपालले यसअघि दिएको कोभिशिल्ड खोप र चीनबाट आएको भेरोसेल खोप फरक छ । त्यसैले खोपका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई बुझाउने, लगाउने लक्षित वर्गको प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने गरेर खोप छैन । यी सबै कुरालाई हेरेर तयारी भइरहेको छ ।
दोस्रो चरणको खोप अभियान अब बैशाख ७ गतेबाट सुरु गर्छाैँ । नेपालसँग भएको खोपबाट दोस्रो डोजको अभियान सुरु गर्छाैँ । नेपाल सरकारले आफैँले खरिद गरेको १० लाख जोड खोप आउने क्रममा छ । त्यो खोप आइसकेपछि पहिलो डोज लगाएका सबैलाई पुग्छ भन्ने योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।
खोप आउनुभन्दा अगाडि धेरै तयारी गरियो भने स्रोत साधन खेर जान्छ कि भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । कोभिशिल्ड, भेरोसेल खोप लगाएको हो भनेर चिन्नेखालको कार्ड बनाउने र व्यवस्थापन एवं ढुवानी कसलाई दिने भनेर पहिचानजस्ता सामान्यभन्दा सामान्य कुुरा गर्नलाई थोरै समय लागेको हो । सम्बन्धित प्राविधिक टोलीले काम गर्दै हुनुहुन्छ ।
अघिल्लोपटक कोभिशिल्ड खोप भण्डारणमा छउञ्जेल अभियान चलाइयो । तर, भारतले खोप तत्काल दिन्नँ भनेपछि त्यो अभियान स्थगित भयो । चीनबाट आएको भेरोसेल खोप ८ लाख डोज एकैपटक दिने हो र ?
अहिले खोप उत्पादन कम र माग बढी भएकाले अहिले हाम्रो हातमा खोप कति छ, त्यही आधारमा योजना बनाउँछौँ । कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोजको अभियान माघ १४ गतेबाट सुरु गर्‍यौं । फागुन अन्तिमसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ ।
कोभ्याक्स सुविधामार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको खोप आउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
कोभ्याक्स सुविधामार्फत संसारभरि समानुपातिक ढंगबाट पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो । त्यसमा प्राथमिकता हेरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । भनेको, नेपालमा फ्रन्टलाइनमा रहने व्यक्तिले एक डोज लगाइसकेका छन् । दोस्रो डोज लगाउने गरी नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । तर, कतिपय देशहरूमा फ्रन्टलाइनमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् । त्यसैले कोभ्याक्सको प्राथमिकता पनि त्यहीअनुसार हुन्छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च विन्दूमा पुगेको एक महिनापछि नेपालमा पनि संक्रमण दर उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । भारतमा संक्रमण दर बढ्दै जाने र नेपालमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यही हिसाबले नेपालमा संक्रमण दर बढ्न सक्छ भनेर प्राविधिकरुपमा विश्लेषण गरेकाले त्यहीअनुसार सरकारले कार्यहरूलाई अगाडि बढाएको छ ।
खोपका सन्र्दभमा हाम्रो समस्या यो–यो हो भनेर नेपालका तर्फबाट राखेका छौँ । कोभ्याक्सको संसारभरिको प्राथमिकतालाई पनि हामीले प्राविधिक आँखाबाट बुझिदिनुपर्छ । नेपालले कोभ्याक्ससँग कुरा राखेको छ । आशा गरौँ, चाँडै खोप नेपाल आइपुग्छ ।
कोरोनाको जोखिमका सम्बन्धमा कुरा गर्दा छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढिरहेको अवस्था छ । सीमा नाकाहरुमा सरकारले कसरी सुरक्षा सर्तकता अपनाएको छ ?
छिमेकी मुलुक भारतका धेरै राष्ट्रमा कोरोना संक्रमण बढेको छ । सीमा नाकाहरुबाट मानिसको आवत–जावत हुनुका साथै पेशा व्यवसाय, श्रम र तीर्थयात्राका लागि धेरै भारतीयहरू नेपाल आउने गर्छन् ।
कोरोनाको दोस्रो लहर र नेपालले अपनाउनुपर्ने सावधानी
स्थलमार्ग हुँदै प्रवेश गर्ने नाकाहरूलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ । पहिला भारतबाट आउनेहरू सीमा नाकाको बाटो हुँदै नआएर चोरबाटो आए । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि चोरबाटो बन्द भएको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासनसँग समवन्य गरेर नाकाबाट प्रवेश गर्नेलाई कडाई गरिएको छ । अनौपचारिक रुपमा छिर्ने बाटाहरू बन्द गरेर औपचारिक रुपमै आउने बाटाहरूमा निगरानी गरिएको छ ।
स्थलमा मार्ग हुँदै आउनेमध्ये केहीमा संक्रमणको शंका लागेमा परीक्षण गरिन्छ । उताबाट आएका लक्षणसहितका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतबाट आउनेमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा छुट्टै सवारी साधनमार्फत आइसोलेसनमा लैजाने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौँ ।
अहिले सीमानाका व्यवस्थित गर्ने, नाकामा रहेका हेल्थ डेक्सहरूलाई व्यवस्थितरुपमा चलायमान गराउने, त्यहाँ रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने, उताबाट आउनेलाई परीक्षण गराउने काम गरेका छौं । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सिकाउने जस्तै– मास्कहरू उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ ।
हवाई मार्ग हुँदै आउने व्यक्तिहरूका लागि हेल्थ डेस्कलाई नियमितरुपमा सक्रिय बनाइएको छ । संक्रमण दर घटेर आवत–जावत गर्नेको संख्या कम हुँदा त्यहाँका कर्मचारी र चेकजाँचका लागि चाहिने सामग्री अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका थियौं । पुनः संक्रमण सर्न नदिनका लागि कर्मचारी लगायत अन्य व्यवस्थापनलाई सक्रिय बनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमा नाकामा निगरानी र कडाइ गरेका छौँ भनिरहँदा भारतबाट कोरोना संक्रमितहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाइकन सीधै गाउँगाउँमा कसरी पुगे त ?
सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्न नदिनका लागि निकायमार्फत काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि प्रयासहरू हामीले पनि गर्नुपर्छ । भारतबाट आएका व्यक्ति संक्रमित हुँदाहुँदै गाउँगाउँ पुगेको अवस्था छ भने समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ ।
कोरोना संक्रमणबारे झट्ट हेर्दा केही नहोला जस्तो लाग्ला तर, यसले कसलाई मृत्युको मुखमा पु¥याउँछ वा सघन उपचार कक्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । आफू जोगिन, आप्mनो परिवार, साथीभाइ र टोल समाजलाई जोगाउन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न अति आवश्यक छ ।
नेपालमा अदृश्य भएको ‘यूके भेरिएन्ट’
विदेशबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति जुनसुकै कामले आए पनि नेपालमा रहेका आफन्त अथवा पेशा व्यवसायसँग सम्वद्ध व्यक्तिले आफुसँग जोडिएका व्यक्तिलाई जोगाउन जसरी पनि अनिवार्यरुपमा सम्झाएर १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्न लगाउनुपर्छ । भारत लगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल आएका व्यक्ति अनिवार्यरुपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ ।
विदेशबाट आएका जो कोही १० दिनसम्म क्वारिन्टन बसेपछि शरीरमा कोरोना भाइरस भए पनि अन्य व्यक्तिलाई सर्दैन भनेर सम्झाएर, बुझाएर नतसाइकन अनिवार्यरुपमा बस्न लगाउनुपर्छ ।
कोभिड र नन्कोभिडका लागि छुट्टै अस्पतालहरू तोकेर विगतमा सेवा प्रवाह गरेका थियाैँ । विगतमा आइसोलेसन, होम आइसोलेसन र क्वारेन्टिनबाट भोगाइ र सिकाइका आधारमा गल्ती नदोहोर्&zwj;याइकन अगाडि बढ्नेछौँ ।
साता दश दिनयता नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । भारतमा झैँ संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो भने सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
ग्राफ हेर्दा नेपालमा संक्रमणको दर तल पुगेको थियो । पछिल्लो समय संक्रमितको ग्राफ विस्तारै बढ्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने छिमेकी मुलुकमा पनि संक्रमितको ग्राफ निकै तल गएपछि एक्कासी बढेर माथि पुग्यो । भारतमा संक्रमण उच्चतम विन्दुमा पुगेको एक महिनामा नेपाल पनि संक्रमण दर बढ्यो ।
विगतको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउनेतर्फ इङ्गित गर्न थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
यद्यपि यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ । यदि सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै संक्रमण बढ्दै गयो भने पहिलेभन्दा सबै सरोकारवाला व्यक्ति र संस्था कसरी सतर्कता अपनाउने र दर बढ्न नदिने भन्नेबारे जानकार छन् । स्वास्थ्य उपचार प्रणाली विकासका हिसाबले हेर्दा एक वर्ष अगाडि महामारी तिव्ररुपमा फैलँदाभन्दा तयारी र क्षमताको विकास भएको छ ।
विगतमा प्रयोगशाला एउटामात्रै थियो भने अहिले सरकारी प्रयोगशाला मात्रै ८४ वटा छन् । त्यसैले परीक्षणको दायरा बढाउन सक्छौँ । अस्पतालमा भएका बेड, आइसीयू, भेन्टिलेटर र हाइडिपेन्डेन्सी युनिटहरू विगतमा कम थिए । ती सुविधाहरू अहिले धेरै बढेको छ । कोभिड र नन्कोभिडका लागि छुट्टै अस्पतालहरू तोकेर विगतमा सेवा प्रवाह गरेका थियाैँ । विगतमा आइसोलेसन, होम आइसोलेसन र क्वारेन्टिनबाट भोगाइ र सिकाइका आधारमा गल्ती नदोहोर्&zwj;याइकन अगाडि बढ्नेछौँ ।
सबै अस्पताल, प्रयोगशाला, सरोकारवालालाई सर्तक एवं तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयल निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सरकारले संक्रमण दर बढेर नागरिकलाई अस्पताल भर्ना हुने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ वर्तमान समयमा बढी ध्यान दिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा कहाँ चुक्दैछ सरकार ? अब के गर्नुपर्छ ?
विगतमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र पीसीआर परीक्षण भद्रगोल हुँदा समूदायमा संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो । यो गल्ती नदोहोर्&zwj;याउन सरकारले कस्तो तयारी गरेको छ ?
पहिले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, परीक्षण लगायतका कुरालाई हेर्दा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् । काम गर्ने क्रममा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै हुन्छन् । कोरोना भाइरस महामारीसँगको हाम्रो पुस्ताको भोगाइ चाहिँ यो पहिलो हो । सम्बन्धित विज्ञहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा पढेर, बुझेर जानेको र व्यवहारमा नेपालीहरूले भोगेको पहिलोपटक हो । यो संक्रमणसँग पढेर बुझ्ने र बुझाउने सीमित व्यक्तिहरू थिए ।
संक्रमण उच्च विन्दूमा पुग्यो । तर, हामीसँग भएका स्रोतसाधनको समायवधिहरू, संक्रमण भोगेका अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालमा जनता र राज्यको प्रयासले धेरै ठूलो दरमा संक्रमण भएन । सरकारले आँकलन गरेअनुसार संक्रमण दर नेपालमा बढेन । यो भनिरहँदा जति क्षति भयो, हाम्रा लागि ठूलो हो । जसका घरमा संक्रमणकै कारण परिवारका सदस्य गुमाउन प¥यो, धनजनको क्षती भयो, त्यो त सतप्रतिशत क्षति हो ।
त्यसैले त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि विशेषतः नाकाबाट आउने–जाने व्यक्तिलाई संक्रमणका बारेमा बुझाउने, व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएका छौँ । नाका हुँदै नेपाल प्रवेशलाई कोरोना संक्रमित भए–नभएको पत्ता लगाएर क्वारेन्टिन आइसोलेसनमा राख्नेतर्फ ध्यान दिएका छाँै ।
संक्रमण कसरी हुन्छ र संक्रमणले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारे जसका घरमा संक्रमणले समस्या बनाएको छ, उनीहरूलाई संक्रमणका कथा–व्यथाहरू राम्रोसँग थाहा छ । जो संक्रमण भएर पनि लक्षणविहीन भएर निको भएका छन्, उनीहरूले हेलचेक्रयाइँ गरेर कोरोना संक्रमण केही होइन भनी सामान्यरुपमा लिँदा संक्रमण दर बढ्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने एउटा डर छ ।
सरकारले जुनसुकै निर्णय गर्दा विज्ञहरूको सल्लाह सुझावअनुसार गरिरहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका सम्बन्धित विषयको प्राविधिकहरूसँग बसेर अन्तरराष्ट्रिय रुपमा भएका अध्ययन–प्रमाणहरूका आधारमा निर्देशिका बनाएर अगाडि बढेका थियाैँ । नेपालमा महामारी फैलने क्रम बढ्यो भने विश्वमा कोभिडका बारेमा आएका नयाँ प्रमाणका आधार निर्देशिका परिर्वतन त्यहीअनुसार भएको हो ।
यसअघि सरकारद्वारा कोरोना संक्रमण पहिचान, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भका निर्देशिकाहरू परिवर्तन भइरहँदा जनता अन्योल परे भनेर जनस्वास्थ्यविद् लगायत जनताले आलोचना गरे, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरस कोभिड—१९ जब पहिचान भयो, संसारका लागि नयाँ थियो । विश्वले स्रोत साधन जुटाएर अध्ययन गरिरहेको थियो । मन्त्रालयले सुरुवाती चरणदेखि नै संसारमा भएका अध्ययनका आधारमा निर्णय लिने र त्यसका आधारमा काम गर्ने गर्‍यौं । नेपालमा विज्ञहरूको सल्लाह परामर्शका आधारमा निर्देशिका बनाइएको हो । यो नितान्त नयाँ रोग भएकाले धेरै कुराहरू समयानुकुल, नयाँ प्रमाण आउने र नयाँ खोजहरू पत्ता लगाउँदै जाने क्रम जारी छ । त्यसका आधारमा परिष्कृत गर्दै अगाडि जानुपर्ने अवस्था हुनु स्वभाविक हो ।
जनमानसमा सरकारले गरेका निर्णय स्थिर हुनुपर्छ भन्ने धारणा भयो । संक्रामक रोगको निर्देशिका समय क्रमअनुसार परिष्कृत हुँदै जान्छ । र, त्यहीअनुसार निर्देशिका बनाउने हो । अहिले कोभिडका बारेमा धेरैलाई थाहा छ । तुलनात्मकरुपमा एक वर्षअघिको कोरोना संक्रमण सम्बन्धी निर्देशिका अब स्थिर हुन्छ ।
कोभिडको सन्दर्भका संसारमा कोही पनि विज्ञ थिएन । महामारीको एक वर्षको दौरानमा धेरै अध्ययन हुँदै जाँदा, काम गर्दै जाँदा विज्ञ भएका हुन् । सुरुमा आएको अध्ययन प्रमाणलाई लिएर कसले चाँडो गर्छ भन्ने हिसाबमा सरकार अघि बढ्ने हो कि अन्य देशले काम गरेका आधारमा अघि बढ्ने भन्ने कुराको दौड जहिले पनि रहन्छ ।
नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर देखियो, लापरवाही नगरौं
महामारीमा धेरै भ्रमहरू आउन सक्छन् । ती भ्रमहरू नआउन् भन्नका लागि काम गर्ने हो । किनभने सरकार जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, नेपालका सन्र्दभमा महामारीको समयमा विज्ञ भनेर जन्मने क्रम धेरै भयो ।
महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार कुन–कुन ठाउँमा चुक्यो ? पुनः नेपालमा संक्रमणको दोस्रो लहर आयो भने विगतबाट के पाठ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सुधार्ने ठाउँहरू जहिले पनि धेरै हुन्छन् । सुधारबिना हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । एक वर्षमा गरेका काम त्यो भन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला । विविध कारणहरूले गर्न सकेनौँ । तिनै कुराहरूमा अबका दिनमा परिष्कृत तरिकाले अगाडि बढ्ने काम गछौँ ।
सुधार गर्नुपर्ने मध्ये पहिलो कोरोना संक्रमणबारे फैलिएको भ्रम थियो । ती भ्रमहरूलाई चिर्न, पत्ता लगाउन, बुझाउन अझ धेरै गर्न सक्थ्यौँ ।
अर्को कुरा, महामारीका बेला एकजना व्यक्ति पदाधिकारी, विषयगत मन्त्रालय, अस्पताल र व्यक्ति विशेषको मात्र जिम्मेवारी पनि हुँदैन, सबैको जिम्मेवारी हुन्छ । महामारीको प्रतिकार्यमा सबैलाई एकै ठाउँ ल्याउन सकिए योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । अझै क्वारेन्टिनलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । त्यहाँनेर हामी कहीँ कतै चुक्यौँ । अथवा, सोचेअनुसार गर्न सकिएन ।
कम स्रोत साधनका बावजुद पनि काम गरेका थियाैँ । अब अस्पतालहरूको क्षमता एकदमै विकास गरेर लैजानुपर्छ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीका धेरै ठूलो परिर्वतन नगरेसम्म देशमा ठूलो समस्या समाधान गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा एक वर्षमा थाहा भयो । अघिल्लो महामारीबाट सिकेका कुरालाई अब संस्थागत गर्दै लैजाने हो ।
‘यो सरकारले एउटा बजेट मात्र ल्याउँछ भनेर नठान्नुभए हुन्छ’
राजेन्द्र महतो भन्छन्– बूढानीलकण्ठमा सर्वदलीय चुनावी सरकारको चर्चा भयो
‘जसपाले राजनीतिक होइन, प्रशासनिक डिल गर्दैछ’
एमालेको विवाद सैद्धान्तिक होइन, ओलीकै सरकार दुई वर्ष जान्छ’
‘रेशम चौधरीको मुद्दा विप्लव र सिके राउतसँग पनि जोडिन्छ’
‘जसपा सरकारको नेतृत्व लिन तयार छ’
गण्डकी प्रदेशमा ८१ कोरोना संक्रमित थपिए
अरब देशका ६ करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा
राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति अपनाउँछौँ : मन्त्री ज्ञवाली
काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीद्वारा गाडी फिर्ता
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ
धरहरा पुनर्निर्माण मन्त्री श्रेष्ठद्वारा अवलोकन
स्पेन र नेपालबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना
सुर्खेतमा कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
गृहमन्त्री थापाले लिए सपथ
ओली ज्ञानेन्द्र बन्न खोजे : खतिवडा